source photo : lexpressdemada.com
Olona roa no maty teo no ho eo ary iray kosa teny amin’ny hopitaly no namoy ny ainy, omaly maraina.
"Avy any Arivonimamo andeha hiakatra ilay kamiao. Ilay fiara Mercedes kosa avy aty an-drenivohitra nikasa hihazo an’Imerintsiatosika. Vokatry ny fandehanan’ity farany mafy no voalaza fa nitarika ny fifandonana teo amin’ireo fiara roa. Olona 23 no maratra mafy ka ny iray tsy mbola mahatsiaro tena hatramin’izao", hoy ny avy amin’ny zandary.
Araka ny loharanom-baovao ihany dia isan’ireo mpamily an’ireo fiara roa ireo. Ankoatra izay dia naratra daholo ihany koa ireo olona telo tao anatin’ilay kamiao.
"Andeha hijery fampisehoan’ny tarika Ambondrona tao Imeritsiatosika ireo tanora maromaro nentin’ilay fiara Marcedes ireo", hoy kosa ny fianakavian’ireo maty sasany teny amin’ny tranom-pokonom-patin’ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona afak’omaly.